बर्डफ्लु परीक्षण गर्न छैन प्रयोगशाला
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजबर्डफ्लु परीक्षण गर्न छैन प्रयोगशाला
विराटनगर । बर्डफ्लुलगायत पशुपक्षीजन्य रोग परीक्षण गर्न प्रयोगशाला अभाव भएको छ।
पशु सेवा विभागमातहत सञ्चालनमा रहेका सात अत्याधुनिक प्रयोगशालामध्ये पाँचवटा कोभिड १९ भाइरस परीक्षण गर्न प्रयोगमा ल्याइएको छ। विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, धनगढी र सुर्खेतस्थित प्रयोगशाला चैतदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रयोग गर्दै आएको हो।
‘तर, अहिलेको अवस्थामा एक मात्र प्रयोगशालाबाट बर्डफ्लुसहित पशुपक्षीजन्यसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगबारे अन्वेषण र परीक्षण गर्न सम्भव छैन’, पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. चन्द्र ढकालले भने, ‘पहिले सबै प्रयोगशालाको सहयोगमा काम गर्दा पनि असहज अवस्था थियो। अहिले जम्मा एक प्रयोगशालाबाट मात्रै अन्वेषण र परीक्षण गर्न सम्भव छैन।’
डा. ढकालका अनुसार हालै बर्डफ्लु संक्रमण देखिएपछि परीक्षणको दायरा बढाउन, अन्वेषण तथा रोकथाम गर्न यस्तो प्रयोगशालाको चर्को अभाव व्यहोर्नुपर्‍यो। ‘पर्याप्त प्रयोगशाला अभावमा अहिले बर्डफ्लुको सानो संक्रमण फैलिँदा नियन्त्रणमा लिन हामीलाई निकै गाह्रो भयो’, उनले भने, ‘ठूलै संक्रमण फैलिएको अवस्थामा प्रयोगशाला अभावमा भयानक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।’
अहिले केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा मात्रै बर्डफ्लु र पशुपक्षीजन्य रोगको अन्वेषण र परीक्षण गर्दा खर्चिलो र समय बढी लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ। बाहिर संकलन गरिएका नमुना जहाज र सडकमार्गबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ
परीक्षण प्रयोगशाला बर्डफ्लु